मस्तिष्काघात के हो ? यसबाट कसरी जोगिने ?
- गाेविन्द पौडेल | काठमाडाैं, फागुन २९
गत हप्ता मेरा एक छिमेकी दाइलाई अकस्मात् हात बाउँडिने र बोली लर्बराउने समस्या देखापर्‍याे । घटना काठमाडौंमै भएको हुँदा परिवारले तुरुन्त अस्पताल लैजान भ्याए । अस्पतालमा पुर्‍याएपछि थाहा भयो, उनको मस्तिष्कको एक रक्तनली थुनिएको थियो । तत्काल उपचार पाएका कारण मस्तिष्क थप बिग्रनबाट जोगियो ।
गत वर्ष चर्चित कांग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशीको मस्तिष्काघातकै कारण निधन भएको थियो । उनको मस्तिष्कको रक्तनली फुटेर रगत जमेको भनिएको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा प्रत्येक वर्ष १ करोड ५० लाख मानिस मस्तिष्काघातको आक्रमणमा पर्ने गर्छन् । उनीहरूमध्ये ५० लाखको मृत्यु हुने र अरु ५० लाख स्थायी रूपमा अपांग बन्ने गर्छन् ।
मस्तिष्काघात के हो ?
हाम्रो शरीरका प्रत्येक अंगको नियन्त्रण र सञ्चालन मस्तिष्कले गर्ने गर्छ । त्यसैले प्रकृतिले आठवटा कडा हाडको बीचमा यो संवेदनशील अंगलाई खोपडीमा सुरक्षित राखेको हुन्छ । मस्तिष्कमा विशेष खालका कोषहरू हुन्छन्, ति कोषहरूलाई न्युरोन भनिन्छ । यिनै कोषका माध्ययमबाट मस्तिष्क र अरु अंगहरूका बीचमा सन्देश आदानप्रदान हुने गर्छ । यी कोषहरूले रक्तनलीबाट रगत मार्फत आएको अक्सिजन र ग्लुकोजलाई आफ्नो खानाको रूपमा उपयोग गर्ने गर्छन् । हामीले लिने अक्सिजन मध्ये २० प्रतिशत त मस्तिष्कले मात्रै उपयोग गर्छ ।
हाम्रो मुटुबाट मस्तिष्कसम्म रगत लैजानको लागि मुख्यत चारवटा रक्तनलीहरू(आर्टरी) रहेका हुन्छन् । यी चारवटा मध्ये तीनवटा आर्टरीमा समस्या आएर एकैछिन रक्तप्रवाह रोकिए पनि एउटा आर्टरीले मस्तिष्कको सबै भागमा रक्तसञ्चार गर्न सक्ने गरी मस्तिष्ककाे संरचना बनेको छ । मस्तिष्क दुई भागमा विभाजित छ, दायाँ र बायाँ भाग । मस्तिकमा पुगेको रगतलाई त्यहाँ रहेका आर्टरीले मस्तिष्को दायाँ र बायाँ भागमा रक्तसञ्चार गराउने गर्छन् । तर कुनै कारणबस यी आर्टरीमा अवरोध आएमा वा फुटेमा मस्तिष्कमा न्युरोन्सलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजनको आपूर्ति बन्द हुन्छ । परिणामस्वरुप न्युरोन्स केही मिनेटमै मर्न थाल्छन् ।
मस्तिष्कको जुन भागका न्युरोन्स मर्छन् उक्त भागले नियन्त्रण गर्ने अंगले काम गर्न छाड्छ । जस्तै बोली नियन्त्रण गर्ने मस्तिष्कका न्युरोन मरेमा बोली लर्बरिने वा बन्द हुन्छ । हातखुट्टा चलाउने न्युरोन मरेमा हात खुट्टाको चलायमान बन्द हुन्छ । यसर्थ मस्तिष्कका रक्तनलीहरू थुनिने वा फुट्नाले मस्ष्तिकको कुनै भागको न्युरोन्सले काम गर्न छोडेपछि शरीरका विभिन्न अंगले काम गर्न छोड्ने अवस्थालाई मस्तिष्काघात अर्थात् स्ट्रोक भनिन्छ ।
स्ट्रोक संसारमा धेरै मान्छेको मृत्य हुने रोगहरू मध्ये एक हो । स्ट्रोक भएका बिरामी मध्ये एक तिहाइको तत्कालै मृत्य हुने , एक तिहाइमा आजीवन कडा पक्षघात हुने तथा बाँकीमा सामान्य समस्या देखिने हुन्छ ।
मस्तिष्काघात दुई प्रकारको हुन्छ ।
इस्केमिक स्ट्रोकः मस्तिष्कमा पुग्ने रक्तनलीहरू रगत जमेर, बोसोको कारण वा अन्य कारणले थुनिने स्ट्रोक हो । मस्तिष्काघात हुने झण्डै ८५ प्रतिशत व्यक्तिमा यो अवस्थाको स्ट्रोक देखापर्छ ।
हेमोरेजिक स्ट्रोकः यो स्ट्रोक मस्तिष्कमा रक्तनली फुटेर हुने गर्छ । जुनसुकै कारणले रक्तनली फुटे पनि मस्तिष्कमा जम्मा भएको रगत बाहिर निस्कन पाउँदैन । सँगै त्यस ठाउँ परिपरिका न्युरोन्सले समेत अक्सिजन र ग्लुकोज पाउँदैनन्, यसले गर्दा न्युरोन्स मर्न थाल्छन् । यो संख्या बढ्दै गएपछि मस्तिष्ककाे सिंगो तन्तुले नै काम गर्न छाड्छ । फलस्वरूप मस्तिष्कको उक्त भागले काम गर्ने अंग चलयमान हुन सक्दैन ।
मस्तिष्कको दायाँ भागले शरीरको बायाँ भागलाई नियन्त्रण गर्छ र बायाँ भागले शरीरको दायाँ भागलाई नियन्त्रण गर्छ । त्यसैले यदि मस्तिष्कको पुरै एक भागमा स्ट्रोक भएमा शरीरको अर्को भाग नचल्ने हुन्छ ।
–दुर्घटनाका कारण टाउको तथा मस्तिष्कमा चोट पर्नु ।
–रक्तनली कमजोर संरचना ।
–उच्च रक्तचाप ।
–मद्यपानको अत्याधिक सेवन ।
–शारीरिक निष्क्रियता ।
–वंशाणुगत कारण । आदि ।
मस्तिष्काघातका लक्षणहरू मस्तिष्कको कुन भागमा क्षति पुगेको छ भन्ने आधारमा फरक फरक हुन्छन् । मुख्यतया यसका लक्षणहरू बुझ्न FAST भन्ने फर्मुला प्रख्यात छ ।
F भनेको फेस, अर्थात् अकस्मात अनुहार बांगिनु । A भनेको आर्म, अर्थात् अकस्मात हात पा पाखुरा झमझमाउनु, बाउँडिनु, सिधा नहुनु वा नचल्नु । S भनेको स्पीच, अर्थात् बोली लर्बराउनु वा बोली बन्द हुनु । T टाइम । अर्थात् यस्तो लक्षण भएको व्यक्तिको उपचारमा हरेक मिनेट महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उसलाई तत्काल अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।
यसबाहेक स्टोकका अन्य लक्षणहरू
–शरीरका अंग झमझमाउनु, बाउँडिनु ।
–शरीरको एक भागले काम नगर्नु ।
–निल्न नसक्नु ।
–बोल्न नसक्नु ।
–एक वा दुवै आँखाले देख्न नसक्नु ।
–सास फेर्न गाह्रो हुनु ।
–सन्तुलन गमाउनु ।
–अकस्मात अत्याधिक टाउको दुख्नु । आदि ।
उपचार तथा जोगिने उपाय
स्ट्रोकको निदान सिटी स्क्यान, वा एमआरआइ गरेर गरिन्छ । यसको उपचार स्ट्रोकको प्रकार हेरेर गरिन्छ । समयमै बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन सके रक्तनली खुलाउने वा मस्तिष्कमा रगत जमेको भए अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ । उपचारपश्चात विभिन्न थेरापीको प्रयोग गरेर शरीरलाई सहज गराउने प्रयत्न गरिन्छ । बिरामीलाई लक्षण देखिएको ३ घण्टाभित्रै स्ट्रोकको पहिचान गरेर उपचार थाल्न सकियो भने धरै बिरामी निको हुने सम्भावना रहन्छ ।
मस्तिष्काघातबाट बच्न यी उपाय अवलम्बन गराैँ
–धुमपान र मद्यपानको सेवन नगर्ने ।
–शारीरिक सक्रियता बढाउने ।
–खराब कोलेस्टेरोल र डायबिटिजलाई नियन्त्रणमा राख्ने ।
–उच रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने ।
–शरीरको तौल नियन्त्रण गर्ने ।
–नुनको सेवन कम गर्ने ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २९, २०७८, ०७:५८:००